नवलपुरका सिडिओ पंगेनी सहित पाँच राष्ट्रसेवक ईन्टीग्रिटी आईकन २०२१ बाट सम्मानित – उज्यालो खबर
नवलपुरका सिडिओ पंगेनी सहित पाँच राष्ट्रसेवक ईन्टीग्रिटी आईकन २०२१ बाट सम्मानित
बुधबार, कार्तिक ०३, २०७८
काठमान्डौ । नवलपुरका सिडिओ मनमाया पंगेनी सहित विभिन्न विधाका पाँचजना राष्ट्रसेवक ईन्टीग्रेटी आईकन २०२१ बाट सम्मानित हुनुभएको छ । हरेक वर्ष जस्तै, यस वर्ष पनि अकाउन्टविलिटी ल्याब नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट इन्टेग्रिटी आईकन २०२१ सार्वजनिक गरेको हो ।
नवलपरासी पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पंगेनी सहित भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज बाँकेका नर्सिङ अधिकृत (कोभिड फोकल पर्सन) शिला शर्मा, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत चन्द्रकान्त चौधरी , भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेण्ट डा. सुमित्रा गौतम, र भाषा आयोगका उपससचिव डा. लोक बहादुर लोप्चनलाई ईन्टीग्रेटी आईकन २०२१ बाट सम्मान गर्ने निर्णय भएको हो ।
इन्टेग्रीटी आइकन नेपाल २०२१ बाट सम्मानित हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र उहाँकाे प्राेफाईल
१. मनमाया भट्टराई पंगेनी
आमाको सपना – छोरी ठुलो ओहोदामा पुगेर जिल्ला सम्हालोस्
मनमाया भट्टराई पंगेनीका हजुरबुबा गाउँका बुद्धिजिवी कहलिन्थे । बि.स. २०१० साल तिरको कुरा हो, मनमायाकी आमा सानै थिईन । उनले पढ्ने ईच्छा देखाईन् । मनमायाका हजुरबुबाले मनमायाकी आमालाई विद्यालय भर्ना गरिदिए । पढाई राम्रै चल्दै थियो । ४ कक्षाबाट ५ कक्षामा जाने बेलामा मनमायाकी आमाको भाई जन्मिए । अब उनले पढाई छोडेर भाईको हेरचाह गर्नुपर्ने भयो । त्यसै बेला उनको ठुलदाईलाई पढ्न बनारस पठाईयो । मनमायाकी आमाको पढाईमा त्यहीनेर पूर्णबिराम लाग्यो । उनको विवाह पनि नपढेकै व्यक्तिसँग भयो । त्यसमा पनि धेरै नै उमेरको अन्तर भएको व्यक्ति । छोरीको रुपमा मनमाया जन्मिईन । आफु पढ्न नपाएको कुराले जहिले पनि उनको मन पोल्दथ्यो । त्यसैले पनि उनी छोरीलाई धेरै पढाएर सरकारी सेवाको ठुलो ओहोदामा पुगेको हेर्न चाहन्थिन् । छोरीलाई पढाउन भनेजस्तो सजिलो थिएन । मनमायालाई कक्षा १ मा भर्ना गर्न उनकी आमाले साहुसँग ऋण लिएकी थिईन । उनकी आमाले त्यस बखत जिल्लाको बडा हाकिमको रवाफ देखेकी थिईन् । उनी छोरीले पनि जिल्ला सम्हालेको हेर्न चाहन्थिन् । मनमायाले पनि आमाको सपनालाई कमजोर बनाईनन् । १ कक्षा देखी १० कक्षा सम्म नै प्रथम भईन् । त्यस बापत कहिल्यै पनि शुल्क तिर्नु परेन । बि.स. २०५३ सालमा उनी अहेवको रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिन् ।
पहिले स्वास्थ्य शिविरको बिरोध गर्ने समुदायका व्यक्ति पछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन स्वास्थ्यचौकी आउनथालेः
मनमायाको पहिलो पदस्थापन नवलपरासीको अरुणखोला स्थीत नयाँढोलानी उपस्वास्थ्य चौकीमा भयो । त्यतीखेर स्वास्थ्यचौकीमा कुनै पनि पूर्वाधार थिएन । पूर्वाधार निर्माण गर्न स्वास्थ्य निर्देशनालयले १० हजार रुपैयाँ दिएको थियो । ३ महिनामा उनले आवश्यक पूर्वाधार सहितको उपस्वास्थ्यचौकी तयार गरिन् । त्यसपछि स्वास्थ्य स्वयमं सेविकाहरूसँग मिलेर गाउँगाउँमा स्वास्थ्य जनचेतना फैलाउने काम गरिन् ।
त्यहाँ स्थीत तमास्पुर भन्ने गाउँमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन खोज्ने व्यक्तिलाई धपाउने चलन थियो । मनमायाले पहिला समुदायका अगुवालाई सम्झाएर सचेतना कार्यक्रम देखी खोप अभियान र गर्भवती तथा सुत्केरी सेवा सञ्चालन गरिन् । विस्तारै गाउँनै पूर्ण खोपयुक्त भयो । गाउँमा स्वास्थ्य सिविरको विरोध गर्ने स्थानीयहरू नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन स्वास्थ्यचौकी जानथाले । कामको व्यस्तताले अरुदिन स्वास्थ्यचौकी जान नसक्नेहरू पनि आईतबार हाटबजार जाने निहुमा स्वास्थ्यचौकी जानथाले ।
भाषा सिकेर स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना
उनले अहेवको रुपमा ललितपुरको धापाखेल स्वास्थ्यचौकीमा २ वर्ष काम गरिन् । त्यहाँका बासिन्दाहरू नेवारी भाषा मात्र बोल्दथे, बुढापाकालाई सम्झाउन झनै गाह्रो हुन्थ्यो । महिलाहरू सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यचौकी आउन पनि लजाउने भएकोले घरमै सुत्केरी हुनेहरुकोे संख्या धेरै थियो । उनले नेवारी भाषा सिकेर स्तनपान र संस्थागत सुत्केरी गराउनुको महत्वको बारे जनचेतना फैलाउन शुरु गरिन । बिस्तारै महिलाहरू स्वास्थ्य चौकीमा आउन थाले । स्वास्थ्य जाँच गराउन थाले र स्वास्थ्य चौकी आउँदा आफुमाथी हुने हिंसाबारे पनि सुनाउन थाले ।
बादी समुदायका महिलाको शसक्तिरणका लागि सर्वेक्षण
२०६३ सालमा उनले शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर महिला विभागमा पदस्थापन भईन् । सिंह दरबार गेट अगाडी बादी समुदायले गरेको बिरोध कार्यक्रमले उनको मन छोएको थियो । विभागमा आईसकेपछि उनले यो विषयमा काम गर्नपाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । त्यो समुदायमा, विशेष गरेर महिलाको समस्या के हो ? भनेर अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव महानिर्देशक समक्ष पेश गरिन् । महानिर्देशकले उनिमाथी भरोसा गरे । उनले दाङ, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र बाँके जिल्लामा गएर तथ्यांक संकलन गरिन् । जम्मा १४३७ घरधुरी बादी समुदायको भएको पत्तालाग्यो । अध्ययनबाट उनीहरूलाई शसक्तिकरण पनि आवश्यक छ भन्ने देखियो । प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाईयो । त्यसपछि बादी व्यवस्थापन समितिको स्थापना भयो । त्यो लगत्तै नेपाल सरकारले घर विकास कार्यक्रम र महिला शसक्तिकरणको कार्यक्रम पनि ल्यायो । त्यसपछिको प्रभावकारिता अध्ययन सर्वेक्षणमा, ति कार्यक्रममा सहभागि महिलाहरु विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध भएको, व्यवसाय गरिरहेको पाईयो ।
सेन्ट्रल फाईलिङ सिस्टमको कुशल कार्यान्वयन
२०७४ सालमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत सह–सचिवमा नाम निकालेपछि उनले निजामती किताबखानाको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाईन् । त्यहाँको सबै भन्दा ठुलो समस्या फाईलहरू व्यवस्थित नहुनु थियो । त्यसको एउटा कारण, प्रविधिको समुचित प्रयोग नहुनु थियो भने, अर्को कारण केही कर्मचारीको फाईल छैन भनेर कामबाट पन्छिने बहाना थियो । उनले त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सेन्ट्रल फाईलिङ सिस्टमलाई कार्यान्वयनमा ल्याईन । यसो गर्दा आ.व. २०७४÷२०७५ मा मात्र करिब ५ करोडको राज्यकोष असुली भयो । अहिले त्यो प्रणालीले निरन्तरता पाएको छ । त्यसरी हरेक व्यक्तिको विवरण सजिलै निगरानी गर्ने संयन्त्र निर्माण भएपछि गलत विवरण पेश गरेर राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्तीको अन्त्य भयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा दुई प्रमुख प्रयास
सुगम भित्रका दुर्गम क्षेत्रका महिलाको उद्दार
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका महिलालाईमात्र सेवा दिईरहेको थियो । उनले सुगम भित्र पनि दुर्गम क्षेत्रका महिला यस कार्यक्रमबाट बञ्चित रहेको देखिन् । त्यसपछि त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी क्षेत्र विस्तार गरिन् । यसबाट सुगम भित्रका पनि दुर्गम क्षेत्रका विशेष गरेर जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरुले सेवा पाउन थाले ।
मर्यादित महिनावारी” कार्यक्रमको आक्रामक कार्यान्वयन
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखको रुपमा आउनु भन्दा पहिला नै लैंगिक समानता नीति बनेको थियो, तर कार्यान्वयनमा आएको थिएन । उनले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याईन् । यो नीतिले हरेक नीतिलाई लैंगिक लेन्सबाट हेर्नथाल्यो । त्यसपछि “मर्यादित महिनावारी” कार्यक्रमलाई आक्रामक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याईन् र महिनावारी प्रतिको धारणा परिवर्तन गर्न “मर्यादित महिनावारी” कार्यविधि बनाउन अग्रणी भुमिका निर्वाह गरिन् ।
महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी कस्तो हुन्छ भनेर कार्यालयमा हेर्न आए
उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर नवलपुर गएपछि केही व्यक्ति उनलाई हेर्न नै आए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी डरलाग्दो, मोटो जुंगा हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका सेवाग्राही त्यतीखेर अचम्ममा परे, जब उनले साधारण मनमायालाई देखे । हेर्न आएका सेवाग्राही, प्रमुख जिल्ला अधिकारी त महिला, दुब्लो पातलो अनी साधारण पनि हुँदोरहेछ भन्ने बुझेर फर्किए ।
विकासमा प्रभावकारी अनुगमन
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भुमिकमा अहिले उनले “विकासमा सुरक्षा” नीति लिएर काम गरिरहेकी छिन् । उनले विकास निर्माणमा अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएपछि अहिले जिल्लामा विकास निर्माणका कार्यहरूले तिव्रता पाएको छ । एक वर्षमा मात्र ७१५ सवारी साधनलाई कारवाही गरिएको छ । वार्षिक १५ लाख राजश्व उठ्ने ठाउँमा करिब २ करोड जती राजश्व संकलन भएको छ । होंसि सिमेण्टलाई विदेशी कम्पनी भनेर हरेक गाडीबाट सिमेण्ट लिएर जाँदा चालकलाई कब्जामा लिएर १००० रुपैयाँ असुली गर्ने प्रचलन थियो । उनले थाहा पाउने वित्तिकै पीडकलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरिन् ।
हिंसा न्युनिकरणमा विद्यार्थी परिचालन
बढ्दो हिंसा टाउको दुखाईको विषय थियो । त्यसका लागि उनले विद्यार्थीसँग प्रहरी कार्यक्रम ल्याईन् । त्यसका लागि १५०० जना विद्यार्थीलाई आफैले हिंसा, अपराधका बारेमा सचेतना फैलाउन र खुलेर आवाज उठाउन तालिम दिईन् । घर समुदायमा कुनै घटना घट्यो भने प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गर्न प्रोत्साहित गरिन । त्यसले बालबालिकालाई थप सामाजिक काम प्रति पनि चासो बढेर आयो ।
२. डा. लोक बहादुर लोप्चन
दिदिको पढाई छुटेपछि कक्षामा प्रथम
लोक बहादुर लोप्चन काभ्रे जिल्लाको खानिखोलामा जन्मिए । उनी कक्षा ५ सम्म गाउँकै बालविकास प्रा.वि.मा पढे । लोप्चन र उनकी दिदि एउटै कक्षामा पढ्दथे । उनकी दिदि कक्षामा प्रथम र उनी द्वितिय हुन्थे । ४ कक्षामा पढ्दै गर्दा घर नजिकैको जंगलमा चर्न गएको बाख्रा जंगली जनावरले खाईदियो । त्यही दिनदेखी उनकी दिदि बाख्रा चराउन जानुपर्ने भयो । दिदिको पढाई रोकियो । ४ कक्षा देखी लोप्चन कक्षामा प्रथम हुन थाले । उनका बुबा डकर्मीको काम गर्दथे । बुबाको कमाईले परिवार धान्न मुस्किल थियो । छोराछोरीलाई पढाउनु त टाढाको कुरा भयो । जसोतसो उनले जनविकास मा.वि.बाट एसएलसि पास गरे तर, उच्च शिक्षा पढ्न सक्ने अवस्था थिएन । केही समय उनी घरमै बसे र पछि बुढाखाने विद्यालयमा पढाउनथालेपछि आफ्नो पढाईलाई पनि नियमित गरे ।
२०६० देखी २०६६ साल सम्म शिक्षक देखी उपनिर्देशक सम्म
हुन त लोप्चनले एसएलसि पास गरेपछि नै पढाउन सुरु गरेका हुन्, तर २०६० साल देखी भने उनी नि.मा.वि.को स्थायी शिक्षक बने । २०६३ सालमा मा.वि. शिक्षकमा नाम निकाले । करिव तिन वर्ष बालुवा मा.वि.मा पढाईसकेपछि केही महिना विद्यालय निरिक्षक भएर पनि काम गरे । २०६६ सालमा उप–सचिवमा नाम निकालिसकेपछि उनले क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालय, सानोठिमिमा उपनिर्देशकको रुपमा काम गरे ।
शिक्षक न्युक्ति पारदर्शी गरेर अब्बल शिक्षक छनौट गरे
२०६८ देखी २०७० साल सम्म उनले पाँचथरमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर काम गरे । उनी जानुभन्दा पहिले शिक्षक न्युक्ति पारदर्शी थिएन । उनले मिलेमतोमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रणालीलाई हटाई परीक्षा समितिद्वारा शिक्षक नियुक्ति हुने प्रणाली स्थापित गरे । प्रकृया पारदर्शी गर्दा उनलाई धम्की पनि आए । तर प्रकृयासँगत, अब्बल शिक्षक नियुक्ति गरिछाडे । उनले त्यहाँ रहँदा ४०–५० जना शिक्षकहरू परदर्शी र प्रकृया अनुसार नै न्युक्ति गरे ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर गएको ७ दिनमै ठप्प शैक्षिक गतिविधि चलायमान
उनी ओखलढुंगा जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर जाँदा एउटा विद्यालयको एक जना अस्थायी शिक्षकलाई खराब आचरण देखाएको भनेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अवकास दिएको थियो । त्यसको विरोधमा अस्थायी शिक्षक संगठनले ९ महिना देखी जिल्लामा न्युक्ति र सरुवासँगै पठनपाठन ठप्प पारेका थिए । त्यो विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनी जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर जाने वित्तिकै समस्या कसरी समाधान गर्ने उपाय निकाल्नु प¥यो भनेका थिए । उनले ओखलढुंगा गएको ७ दिनमै समस्या समाधान गरेर ठप्प जस्तै बनेका शैक्षिक गतिविधी चलाएमान बनाएका थिए ।
लक्ष्य निर्धारण गरेको एक वर्षमै विद्यालय उत्कृष्ट सावितः
उनी २०७३ सालमा ओखलढुंगा गईसकेपछि प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक विषय, प्रत्येक शिक्षक र प्रत्येक विद्यार्थिको सिकाइ उपलब्धि ५०% मानेर बि.सं २०७५ साल सम्म २५% वृद्धि गरी ७५% पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । यस अभियानको लागि घोषणा पत्र पनि जारी गरे । विद्यालयले ५०% ल्याउनै पर्ने भनेर लक्ष्य राखियो । ५०% पनि नआएमा प्रधानाध्यापकको नै सरुवा गर्ने निर्णय भयो । लक्ष्य निर्धारण गरेर उनी हरेक विद्यालय पुगे । त्यसको नतिजा, जिल्लाका प्राय सबै विद्यालयहरूको सिकाइ उपलब्धि बढ्यो भने, दुई विद्यालय उत्कृष्ट नै सावित भए । वरूणेश्वर मा.वि., रामपुर, ओखलढुंगा पटक पटक पूर्वाञ्चल प्रथम र पछि प्रदेशमै सर्वोत्कृष्ट भई राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भयो । त्यसै गरेर, सगरमाथा जनता उमावि ओखलढुंगाको एसएलसी नतिजा, कार्यक्रम सुरू गर्नु भन्दा अघिल्लो वर्ष १९% थियो, विद्यालयको अभियान सुरू गरेको १ वर्षपछि एसएलसीको नतिजा ९०% आयो ।
लक्ष्य निर्धाण भूकम्पले प्रभावित, सट्टा शिक्षक राख्ने प्रथा अन्त्यः
दोलखा पनि जाने वित्तिकै शैक्षिक सुधार प्रारूप घोषणा गरे । १० भन्दा बढी विद्यालयहरूमा स्वतः नमुना घोषणा गरी कार्यान्वन भयो । प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको प्रत्येक विषय सिकाइ उपलब्धि १०% वृद्धि गर्नुपर्ने लक्ष्य राखी कार्यान्वयन गरियो । तर, भूकम्पका कारणल ओखलढुंगामा जस्तो परिणाम नआउँदै उनको सरुवा भयो । तर अरु सुधारात्मक कार्यले भने देखिने नतिजा ल्यायो । सट्टा शिक्षक राखेर सदरमुकाम बस्ने, विद्यालय नगई अन्यत्र काम गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने शिक्षकलाई कारबाही उनले शुन्य सहनसिलताका आधारमा कारवाही गरे । जसमा २० भन्दा बढी शिक्षक कारवाहीमा परे । यस अभियानमा समुदायको पनि सहयोग रह्यो ।
भाषा आयोगमा आईसकेपछि एक मात्र कुसुन्डा भाषा बोल्ने व्यक्तिको खोजी गर्न देशका विभिन्न ठाउँ पुगे
लोप्चन भाषा आयोगमा मातृभाषा शिक्षा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । भाषा आयोगको काम भनेको भाषा संरक्षण पनि हो । कुसुन्डा जाती आफै पनि लोपोन्मुख जाती हो । कुसुन्डा भाषा बुझने र बोल्ने एक जना मात्र व्यक्ति हुन्, कमला कुसुन्डा । भाषा आयोगमा लोप्चन आएपछि सबै भन्दा पहिले उनले कमलाको खोजी गरे तर, सम्पर्क हुन सकेन । तिन महिनापछि आफन्तको सहयोगमा कमलाको ठेगाना पत्ता लगाए । श्रीमान पनि रोगी र छोरा अपांग, त्यसमाथी, आर्थिक अभावका कारण दाङको लमही स्थीत एक ईटा भट्टामा काम गरिरहेको थाहा पाए । त्यहाँबाट भाषा आयोगका पदाधिकारीले उद्धार गरी घोराही उपमहानगरपालिकाको सुपैलाकोटमा बस्ने बन्दोबस्त गरे । भाषा आयोगले कुसुन्डा भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न प्रति महिना ३ हजार भाषा वृत्ति दिने गर्दथ्यो । उनले प्रति महिना १३,४५० भाषा वृत्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरे । कमलाबट भाषा सिकेर समुदायलाई भाषा सिकाउने उर्मिला कुसुन्डालाई प्रति महिना ६,००० भाष वृत्ति उपलब्ध गराए । त्यसै गरेर कुसुन्डा भाषा उत्थानका लागि उप–महानगरसँग समन्वय गरी कम्प्युटर सहित आवश्यक सामाग्री खरिद गरी कुसुन्डा भाषा कक्षाको लागि पूर्वाधारको समेत व्यवस्था गरे । त्यसको लागि उनले पाठ्य सामाग्री लेखन गरी प्रकाशन गर्ने व्यवस्था समेत गरे ।
विद्यालयमा भाषिक अधिकारको संरक्षण
काठमाण्डौ महानगरपालिकाले विद्यालयमा नेवारी भाषालाई मात्र अनिवार्य गरेको छ । बौद्ध क्षेत्रमा तामाङ भाषिको बाहुल्यता छ । यसअघि पनि त्यहाँ स्थीत महेन्द्र बौद्ध मा.वि.मा तामाङ भाषाको पढाई हुँदै आएको थियो । यो कुरा लोप्चनले थाहा पाएपछि नेवा दया दबुलाई बोलाएर भाषा आयोगमा छलफल चलाए । हाल नगरपालिकाले कुनै ठोस निर्णय नलिए पनि तामाङ भाषको पढाई भने नियमित रहेको छ । यसबाट बहुसंख्यक तामाङ विद्यार्थीहरु भाषिक अधिकार बञ्चित हुनबाट जोगिए ।
उनले आफै पनि सानो छँदा आफ्नो मातृभाषा तामाङ बोल्दा नेपाली र अंग्रेजीमा पछाडी परिन्छ भन्ने लघुताभाषकै कारण आफ्नो मात्रृभाषा बोलेनन् । जसले गर्दा कहिलेकाही उनलाई आफुले भाषिक पहिचान गुमाएको महसुस हुन्छ । त्यही कारणले पनि आजभोली उनी कसैले पनि आफ्नो भाषिक पहिचान नगुमाओस भनेर लागिपरेकाछन् ।
३. शिला शर्मा
दिदिहरूलाई देखेर नर्स बन्ने रहर
शिला शर्मा वि.सं २०४२ सालमा बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा जन्मिईन । उनको बाल्यकालको पढाई गाउँकै चुरे माध्यामिक विद्यालयमा भयो । उनका ठुलो बुबा र काकाका छोरीहरू नर्सिङ सेवामा थिए । उनी कहिलेकाहीँ दिदिहरूसँगै अस्पताल जाने गर्दथिन् । दिदिहरुले बिरामीको सेवा गरेको देख्दै गर्दा उनलाई पनि नर्स बन्ने रहर पलायो । कक्षा ८ मा पढ्दा उनले जसरी पनि नर्स बन्ने अठोट कसिन् । पैसा तिरेर नर्स पढाउने परिवारको आर्थिक क्षमता छैन भनेर उनले राम्रोसँग बुझेकी थिईन् । त्यसैले पनि छात्रवृत्तीमा नाम निकाल्नुपर्छ भनेर उनले मेहनत गरिन् । सोही अनुरुप २०५८ सालमा उनले एसएलसि उतिर्ण गरिन् । छात्रवृत्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह पुरा गरेकी शर्माले छात्रवृत्ति पाएरै बिएन सकिन् ।
दबाब र धम्किीको प्रवाह नगरी पीडितलाई उपचार तथा न्याय दिन तत्पर
२०७३ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी शर्माले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको फोकल पर्सनको जिम्मेवारी पाईन् । बाँकेमा हिंसा पीडित महिलालाई उद्धार पश्चात कहाँ राख्ने भन्ने चुनौती थियो । माईती नेपालसँगको समन्वयमा सेफ हाउसको व्यवस्था गरिन् । जहाँ हरेक वर्ष १८० जना लाभान्वीत हुदै आएकाछन् । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा प्राय जसो घटनाहरु रातिको समयमा आउने गरेकाछन् । तर, उनले कहिल्यै पनि थकित महसुस गरिनन् । अहिलेसम्म उनले १५० भन्दा बढी केसहरु हेरिसकेकीछिन् । प्राय जसो घटनाहरु दर्ता भए पनि दवाबमा मिलाउन खोजिन्थे । उनीकहाँ पुगेका घटनाका पीडितले भने न्याय पाए । कतीपय घटनाका पीडकहरू उनलाई धम्कि पनि दिने गर्दछन्, तर उनी जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हटिनन् । उदाहरणको लागि, एकजना बालिका चिनेजानेकै व्यक्तिबाट बलात्कृत भएको घटना दर्ता भएको थियो । मुद्दा परिवर्तन गरिदिनुप¥यो भनेर उनलाई धम्की र प्रलोभन देखाईयो । उनले तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराईन् । पीडितले न्याय पाईन । पीडकलाई कानून बमोजिम कारवाही भयो ।
व्यवस्थापकिय कार्यकुशलताले कोभिडका बिरामी बेड र अक्सिजन नपाएर फर्किनु परेन
एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला नेपालमा पनि कोभिडको संक्रमण देखिन थाल्यो । भेरी अस्पतालले उनलाई कोरोना फोकल पर्सनको जिम्मेवारी दियो । कोरोना महामारी शुरु हुँदा नेपाल सरकारले आफ्नै निर्देशिका बनाईसकेको थिएन । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका हेर्दै नमुना निर्देशिका तयार गरेर लागु गरिन । नर्सहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिन । यहि बिचमा आईसोलेशन पनि तयार भयो । पहिलो र दोस्रो दुबै लहरमा नेपालगञ्ज कोरोनाको हटस्पट नै बन्यो । जताततै बेड, अक्सिजन र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव थियो । भेरी अस्पतालमा एउटा हल मात्र कोभिडका बिरामीको लागि छुट्याईएको थियो । उनले ४ ओटा हल र करिडोर पनि प्रयोगमा आउने गरी विस्तार गरेर कोभिड वार्ड बनाईन् । त्यसपछि कोभिडका बिरामी बेड नपाएर फर्केर जानु परेन । उपलब्ध अक्सिजनको समुचित उपयोग होस भनेर अक्सिजन राउण्डको व्यवस्था गरिन । त्यसका लागि अफ ड्युटी नर्सहरुले अक्सिजन नपुगेको, चुहावट भएको र बढि प्रयोग भईरहेको बारेमा निगरानी गरे ।
परिवारको सदस्य गुमाउदा पनि विचलित नभएर जिम्मेवारीमा खटिईन
कोभिडकै कारण उनले ससुरा गुमाईन् । सानो छोरा पनि संक्रमित भयो । छोरालाई उनले माईतीमा छोडेर बिरामीकै सेवामा खटिईन । उनको परिवारलाई जसरी प्रभावित ग¥यो, त्यसरी नै अरुको परिवारलाई प्रभावित नगरोस भनेर पनि उनी दिनरात कोभिड रोकथाममा खटिईन् । उनी र उनको टिमको प्रयासले भेरी अस्पतालले कोभिड रोकथाममा उदाहरणिय काम गर्न सफल भयो ।
४. डा. सुमित्रा गौतम
दैनिक ३०–४० जना सेवाग्राही आउने स्वास्थ्यकेन्द्रमा दैनिक ३००–४०० सेवाग्राही आउनथाले
डा. गौतमले सरकारी सेवा शुरु गरेको सुरुवाती दिनमा बाँकेको लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा र त्यसपछि खजुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गरिन् । खजुरामा उनी जानु भन्दा पहिले पनि मेडिकल अधिकृतको दर्बन्दी थियो, तर कोही पनि त्यहाँ बस्दैबस्दैनथ्यो । अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा बस्दैनथे । दैनिक ३० देखी ४० जना सम्म व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा लिन स्वास्थ्य केन्द्र पुग्ने गर्दथे । त्यहाँ पुग्नेहरूको पनि सेवा प्रती गुनाशो मात्र हुने गर्दथ्यो । डा. गौतम त्यहाँ गएपछि स्थानीयले सजिलै चिकित्सकिय सेवा पाउनथाले । दैनिक ३०० देखी ४०० जना सम्म सेवाग्राहीले सेवा लिनथाले ।
सिरहामा अस्पतालको भौतिक संरचना फेरियो
छात्रवृत्तिमा एमडि सकेपछिको उनको पदस्थापन सिरहा अस्पतालमा भयो । अस्पतालको अवस्था दयनिय जस्तै थियो । भौतिक संरचना लथालिंग थियो । रिफरल अस्पतालको रुपमा परिचित थियो । १६ महिना त्यहाँ बस्दा १५ बेडको अस्पताल बनाउन पहल गरिन । सामान्य बिरामी रिफर हुने प्रचलन घट्यो ।
सिन्धुली अस्पताल देशकै नमुना अस्पताल बन्यो
उनी नवौँ तहमा बढुवा भएर सिन्धिुली अस्पतालमा सरुवा भईन् । उनी जानु भन्दा पहिले सेवाग्राहीले अस्पतालबाट सामान्य ड्रेसिङ सम्मको सुविधा मात्र पाउँदथे, तर उनी गईसकेपछि स्त्री रोग, एपिम्डिसाईटिस, हर्नियाका ठुला शल्यकृया पनि हुनथाले । मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम घोषणा त भएको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन । डा. गौतमले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईन् । ३० वर्ष माथी उमेरका २००० जनाले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराए । परीक्षण गराउने मध्ये ७० प्रतिशत महिला थिए । परीक्षण गराउँदा दुई जनामा अन्तिम चरणको क्यान्सर देखियो । केहीमा क्यान्सरको सुरुवाती चरण देखियो । परीक्षण गर्ने मध्ये केही व्यक्ति त त्यस भन्दा पहिले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा नगएका पनि थिए । यसबाट धेरैले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ भनेर पनि सिके । पाठेघर खस्ने समस्याले ग्रसित महिलाको सफल उपचार पाए । अस्पताल नमुना बन्यो । ३५ देखी ४० अस्पतालका प्रतिनिधी त सिन्धुली अस्पतालको अवलोकन भ्रमणमा नै आए ।
सिन्धुली अस्पताल प्रति आम सेवाग्राहीको सोचाई नै परिवर्तन गर्न सफल डा. गौतम केही समय अझै सोही अस्पतालमा बिताउन चाहन्थिन् । उनको कामलाई नियालीरहेका बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले उनको आवश्यकता भक्तपुर अस्पतालमा देखे र डा. गौतमको सरुवा भक्तपुर अस्पतालमा भयो । गौतम सिन्धुलीबाट सरुवा भएर भक्तपुर आईसकेपछि पनि धेरै सेवाग्राही उनलाई खोज्दै अस्पताल आउने गरेका छन् ।
अस्तव्यस्त अस्पताल एक वर्षमा नै प्रदेशकै ८ अस्पताल मध्ये उत्कृष्ट
२०७६ साल मंसिरमा डा. गौतम भक्तपुर आउँदा अस्पतालको अवस्था निकै नाजुक थियो । त्यतीबेला पुराना कर्मचारीले तलब नपाएर आन्दोलन चलिरहेको थियो । विस्तारै व्यवस्थापन समिति, कर्मचारी र डा. गौतमको अथक प्रयासले बिवाद समाधान भयो, अस्पतालले दिने सेवामा सुधार आयो । एक वर्ष पछि त भक्तपुर अस्पताल बागमती प्रदेशका ८ अस्पताल मध्ये उत्कृष्ट हुन सफल भयो । पहिले सामान्य शल्यकृया पनि नहुने रिफरल अस्पतालको परिचय बनाएको अस्पतालमा अहिले सुत्केरी सेवा, सघन शल्यकृया, नाक, कान, घाँटी, अल्जाईमर बिरामीलाई उत्कृष्ट सेवा दिईरहेको छ । १६ वर्ष देखी आईसियु बेड नभएको अस्पतालमा अहिले ३६ ओट आईसियु बेडको व्यवस्था गरिएको छ । सबै भन्दा ठुलो कुरा अस्पताल प्रति सेवाग्राहीको धारणा परिवर्तन भएको छ । अस्पतालबाट सेवा लिने सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको छ । एकै दिन ओपिडिमा सेवा लिनेको संख्या ५०० जना भन्दा बढी हुने गरेको छ । पहिले भक्तपुर अस्पताल गयो भने सकुशल मान्छे पनि मर्छ भन्नेहरु अहिले जसरी पनि बेड मिलाईदिनुप¥यो भनेर आउने गरेकाछन् ।
कोभिड १९ व्यवस्थापनका लागि तिन रणनीति
कोभिड १९ पछि उनले अस्पतालसँगै खरिपाटी आईसोलेसनको जिम्मेवार पनि सम्हालिन । कोभिड रोकथामका लागि उनले तिन ओटा रणनीति अगाडी सारिन,
१. बिरामी व्यवस्थापन ः कोभिड र कोभिड नभएका बिरामीको लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिन् । जसले गर्दा लकडाउनको बेला पनि कोभिड बाहेक अन्य बिरामीले अल्ट्रासाउण्ड, शल्यकृया र अन्य आकस्मिक सेवाहरु निरन्तर पाए । अस्पताल आएका बिरामी फर्केर जानु परेन ।
२. जनशक्ति व्यवस्थापन ः कोभिडका बिरामी हेर्ने चिकित्सक र नर्सलाई अस्पतालमै बस्ने व्यवस्था मिलाईएको थियो । तिन दिनको अन्तरालमा ८२ जना कोभिडका बिरामी भर्ना हुँदा पनि सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिएको थियो । यसका लागि उनले फिजिसियन देखि डेन्टिस्ट सम्मलाई खटाएकी थिईन् ।
३.बन्दोबस्त व्यवस्थापन ः पिपिई, स्वास्थ्यकर्मीलाई खाने बस्ने व्यवस्थाको जिम्मा अस्पताल व्यवस्वथापन समिति र अस्पताल विकास समितिलाई दिईएको थियो । दोस्रो लहरमा देशैभरी अक्सिजनको अभाव हुँदा उनले जनकपुर र रौतहट जिल्लाबाट मगाएर भए पनि बिरामीलाई अक्सिजनको अभाव हुन दिईनन् । थुप्रै पटक त उनी आफैले कम्पाउण्डमा बसेर सिलिण्डर गनिन् ।
महिलाले पनि नेतृत्व लिन सक्छन र ? भन्ने आम अवधारणालाई चुनौती दिन र आफुलाई अब्बल छु भनेर प्रमाणित गर्न ईमानदारिताका साथ लागिपरेकै कारण पनि डा. गौतम सफल भएकिछिन् ।
५. चन्द्रकान्त चौधरी
चाँडो काम पाईन्छ भनेर जेटिए पढे
सिरहाको महेश्वरी गाउँमा जन्मिएका चन्द्रकान्तको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । कक्षा ५ सम्म गाउँकै महेश्वरी विद्यालयमा पढेका चन्द्रकान्तको परिवारले त्यो भन्दा बढी पढाउन नसक्ने भएपछि कक्षा ६ देखी कक्षा १० सम्म मामा घरमा बसेर पढे । उनका काका पनि कृषि क्षेत्रमै थिए । उच्च शिक्षाका लागि अरु विषय पढ्न परिवारको आर्थिक अवस्थाले नदिने र जे.टि.ए. पढ्दा काम पनि चाँडै पाईन्छ भनेर काकाले सुझाएपछि उनी जे.टि.ए. पढ्न गए । पढाई सकेपछि लोकसेवा परीक्षा दिएका चन्द्रकान्त २०६० सालमा प्राविधिक चौथोबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरे ।
व्यवसायिक तरकारी खेतिको क्षेत्र बिस्तार
थोरै क्षेत्रमा खेती गर्दा लगानी बढी लाग्ने र घर खर्चलाई मात्र पुग्ने हुन्छ । क्षेत्र विस्तार गरेर खेती गर्दा राम्रो कमाउन सकिन्छ भनेर उनले शुरुमा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नं. ३ का ५÷७ जना किशानहरु भेला गरेर आफ्नो कुरा राखे । १० कठ्ठा जग्गामा खेती गर्ने कृषक अहिले ८÷९ बिगाहामा खेती गर्ने भएका छन् । उनले वडा नं. ८ मा बेमौषमी तरकारी खेतीको सम्भावना राम्रो भएको देखे । यो कुरा जनप्रतिनिधिहरु समक्ष राखे । २०७५ सालमा गाँउपालिकाबाट बजेट बिनियोजन गरेर बेमौषमी तरकारी क्षेत्र घोषणा भयो । हाल त्यस क्षेत्रका ८२ जना किशानहरु बेमौषमी खेती गरेर आमदानी लिईरहेकाछन् ।
स्थानीय तहमा माटो परिक्षणको प्रयोगशाला स्थापना
प्रदेश सरकारले माटो परीक्षण प्रयोगशालालाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम थियो । प्रदेश सरकारले ५ स्थानीय तहलाई प्रयोगशालाका सामानहरु सहयोग ग¥यो । ५ वटा मध्ये सबै भन्दा पहिले मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले ल्याब सञ्चालन ग¥यो । पहिले अदुवामा रोग लाग्ने समस्या थियो । अहिले माटो परीक्षण गरेर अदुवा लगाउदाँ उत्पादन बढेको छ । यसले गर्दा कृषकहरु अदुवा खेती प्रती आकर्षित भएकाछन् ।
सहकारी मार्फत बजारीकरण
कृषकले उत्पादन बढाए पनि उचित मुल्य नपाउने समस्या समाधान गर्न उनले सहकारी मार्फत बजारीकरण अवधारणा पालिकामा पेश गरे । पालिकाले बजेट छुट्यायो । त्यसपछि खुला प्रतिश्पर्धाबाट एउटा सहकारी पसल सञ्चालनमा आयो । त्यसपछि कृषकले कम मूल्य पाउने र उपोभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु पर्ने समस्या न्यूनीकरण भयो । त्यसमाथी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न धान, गँहु, मकै, कोदो, फापर जस्ता अन्न सहकारी मार्फत बिक्रि गर्दा पालिकाले किलोको २ रुपैया थप दिने र सहकारीले पनि भण्डारन गरे बापत किलोको २ दुई रुपैया पाउने व्यवस्था लागु गर्न पनि उनले नै पहल गरे ।
किशान क्रेडिट कार्ड
दुई लाख सम्म ऋण उपलब्ध हुने गरी किशान क्रेडिट कार्ड २५ जनालाई वितरण गरिएको छ । यसको फोकल पर्सनको रुपमा चन्द्रकान्त आफै छन् । उनले करिब ७० जना किशानको लागि क्रेडिट कार्ड सिफारिस गरिसकेका छन् । नेपाल बंगलादेश बैंकले प्रकृया पुरा गरेर कार्ड मार्फत कर्जा उपलब्ध गराउँदछ । विशेष गरेर व्यवसाय सुरुवात गर्ने साना किशान जस्तै, २ वटा गाई पाल्ने, १० वटा बाख्रा पाल्ने कृषकहरुलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम ल्याईएको हो ।
कृषक व्यवसायिक खेतिबाट मनग्गे आमदानी गररे खुसी अनुहार लिएर कार्यालय आउँदा रमाउने चौधरीले व्यवसाय, बजार र प्रविधीसँग किशानलाई अभ्यस्त बनाएर एक उदाहरणीय कृषि प्राविधिकको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।
चितवनमा अख्तियारको छापा , चनौली मालपोतबाट हाकिम र वडा नं. २० बाट अमिन पक्राउ
आज विश्व एड्स दिवस, नवलपुरमा ३७२ एचआइभी संक्रमित
जेहेन्दार विद्यार्थी प्रोत्साहन सहयोग तथा स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न
चितवनमा मंसिर १७ गतेबाट मतदाता नामावली संकलन कार्य सुरु हुने
हामी हौँ लक्ष्मी माविको सर्वेयर
मोम्चो कथासङ्ग्रह प्रकाशन
नवलपुरमा माइत हिडेकी २१ वर्षीया कार्की बेपत्ता
नवलपुरमा मंसिर १७ बाट दुई चरणमा मतदाता नामावली संकलन गरिने
पाँच दिन पछि खुल्यो नबजागरण क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा लागेको ताला
एमाले महाधिवेशन : मतदान सकियाे
नेतृत्व चयन प्रक्रियाको निर्वाचन रोक्न रावलको माग